Inona avy ireo mitokana - karazana sy fampiharana - Geofumadas
Desambra, 2019 ArcGIS-ESRI, Fampianarana CAD / GIS
Ny tsipika mifanintona dia tsipika manambana ny tanjona mitovy lanja. Amin'ny sariitatra, mitambatra ny firaharahina manondro haavo mitovy amin'ny haavon'ny fenitra, toy ny haavon'ny ranomasina. Ny sarintany iray misy contour dia torolàlana iray hisolo tena ny misongadina amin'ny tontolon'ny jeografika faritra iray mampiasa andalana. Ampiasaina tsy tapaka izy io mba hanehoana ny haavony, ny fironana ary ny halalin'ny lohasaha sy ny havoana. Ny habaka eo anelanelan'ny takelaka roa miverina mankany amin'ny sarintany dia antsoina hoe endrika manelanelana ary mampiseho ny mampiavaka azy amin'ny farany.
Miaraka amin'ny ArcGIS ianao dia afaka mianatra mampiasa talenta tsara kokoa, ka ny sarintany dia afaka mampifandray ny haben'ny telo-dimensional any amin'ny faritany misy ny sarintany roa sosona. Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny sarintany mitokana na contours, ny mpanjifa dia afaka mandika ny tehezan-javatra eto an-tany. Na lalina io na haavon'ny faritra iray, dia afaka miresaka momba ny jeolojia ny faritra ny geoform. Ny habaka eo anelanelan'ny aloka roa miaraka amin'ny tsipika dia manome data betsaka misy ny mpanjifa.
Afaka miankohoka, mahitsy na mitambatra amin'ireo roa ireo izay tsy miampita. Ny firesahana ny haavon'ny sezera dia ny haavon'ny ranomasina. Ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny isolines dia manondro ny fironana an-tsehatra ao ambanin'ny fandinihana ary antsoina hoe "interim". Raha miparitaka mafy ireo voaroaka dia hampiseho fientanentanana mihoa-pampana izy. Etsy an-danin'izany, raha aseho lavitra ny sezera, dia misy resaka sombin-doko malefaka io. Ny fantsona, lalan-drano ao amin'ny lohasaha dia aseho ho "v" na "u" ao amin'ny sarintany ankavanan'ny làlana.
Ireo vorona dia mazàna omena anarana miaraka amin'ny awana "iso" izay midika hoe "mitovy" amin'ny teny grika, araka ny karazana habe miovaova napetaka. Ny prefix «iso» dia azo averina miaraka amin'ny «isallo» izay mamaritra fa ny tsipika endrika dia miakatra izay misy ny fiovana miova ao anatin'ny hafainganam-pandeha mitovy. Na dia eo aza ny hoe matetika ny voambolana hoe mahazatra, ny anarana hafa dia ampiasaina matetika amin'ny meteorolojia, izay misy fanaingoana lehibe kokoa ny fampiasana sarintany topografika misy antony maromaro amin'ny fotoana iray. Mitovy amin'izany ihany koa, ny toerana sy ny takelaka tsy misaraka dia mampiseho fironana mitovy.
Tantara mikasika ny aloka
Ny fampiasana ny tsipika mampifandray teboka mitovy lanja dia efa nisy hatry ny ela na dia teo aza ny hoe samy hafa anarana no nahafantaran'izy ireo. Ny fampiasana ny tsipika fizarana voalohany dia natao mba hampisehoana ny halalin'ny lalan'ny rano Spaarne akaikin'i Haarlem, avy amin'ny holandey iray antsoina hoe Pieter Bruinsz tamin'ny taona 1584. Ny isolines izay midika hoe lalim-paka hatrany dia fantatra amin'ny anarana hoe "isobaths" Nandritra ny taona 1700, ny tsipika dia nampiasaina tamin'ny sary sy sarintany mba hamaritana ny halalin'ny haben'ny rano sy ny faritra. Edmond Halley tamin'ny taona 1701 dia nampiasa tsipika contour isogonal miaraka amina karazany manintona kokoa. Nicholas Cruquius dia nampiasa isobaths misy mpanelanelana mitovy amin'ny 1 fathom mba hahatakarana sy hanintonana ny farafaran'ny lakan-drano Merwede tamin'ny 1727, raha i Philippe Buache dia nampiasa vanim-potoana antonony 10 fathoms ho an'ny English Channel tamin'ny 1737. Tamin'ny 1746 Domenico Vandelli dia nampiasa tsipika contour mba hamaritana ny endrika ambonimbony, nanoratany ny torolàlana ho an'ny Duchy of Modena sy Reggio. Tamin'ny 1774 dia nanao ny fitsapana Schiehallion izy mba hamaritana ny sakan'ny sakan'ny tany. Ny hevitra momba ny mitokana dia nampiasaina handinihana ireo tehezan'ireo tendrombohitra ho porofo. Nanomboka teo dia lasa paikady iraisana ny fampiasana mitokana ho an'ny fanaovana sarintany. Ity paikady ity dia nampiasain'i JL Dupain-Treil tamin'ny 1791 ho mpitari-dalana an'i Frantsa ary tamin'ny taona 1801 dia nampiasain'i Haxo ho an'ny orinasany ao Rocca d'Aufo. Nanomboka teo dia nisy ny fampiasana ankapobeny ny fitokana-monina ho an'ny sarintany sy ny fampiharana samihafa.
Ao amin'ny 1889 Francis Galton dia nanolotra ny fitenenana hoe "isogram" ho loharanon'ny fomba fijerin'ny andalana izay mampiseho fitoviana na fampitoviana manasongadina momba ny foto-kevitra na asongadiny. Ny voambolana "isogon", "isoline" ary "isarithm" dia mazàna mba hisolo tena ny fanaintainana Ny teny hoe "isoclins" dia manondro andalana iray izay mifantoka miaraka amin'ny fironana mitovy aminy.
Karazana sy fampiharana ny misera
Isolines dia nampiasaina betsaka tamin'ny sarintany ary fanehoana fampahalalana an-tsary sy azo refesina. Ny andalana mifangaro dia azo raisina ho toy ny fandaharana na amin'ny fijerena mombamomba azy. Ny fijery fisaka no fanehoana ny mpitari-dalana, mba ho hitan'ny mpijery azy avy any ambony. Ny fomba fijerin'ny mombamomba dia takina tsy tapaka izay asiana tenda. Ohatra, ny tanimbary any amin'ny faritra iray dia azo zahana amin'ny alàlan'ny fandaharana na fandaharana amin'ny tsipika, raha ny fahitana rivotra kosa any amin'ny faritra dia azo jerena amin'ny fahitana mombamomba azy.
Raha mahita fantsona mideza be loatra ianao amin'ny torolàlana iray, dia ho hitanao fa mitambatra amin'ny alàlan'ny endrika misy ny "transporter" ny alokaloka. Ho an'ity toe-javatra ity, ny tsipika farany amin'ny farany dia misy marika eo amin'ny diplaoma izay manondro ambany. Ny fanaingoana koa dia aseho amin'ny alàlan'ny fifandirana mifanakaiky, ary saika tsy misy izany dia mifampiresaka izy ireo na miorina mafy.
Ireo andalana mifangaro dia ampiasaina amin'ny sehatra samihafa, mba hampisehoana fampahalalana be momba ny toerana iray. Na izany na tsy izany dia mety hiova miaraka amin'ireo karazana fampahalalana itenenana ny teny ampiasaina.
tontolo iainana: Isopleth dia ampiasaina hamolavola tsipika izay mampiseho endrika miovaova tsy azo tombanana amin'ny fotoana iray, na izany aza, dia sampana fampahalalana izay angonina ao amin'ny faritra lehibe kokoa, ohatra, ny hatevin'ny mponina.
Toy izany koa, ao amin'ny tontolo Isoflor, isoplette dia ampiasaina mba hampifangaroana ireo distrika miaraka amin'ireo karazany voajanahary mampitaha azy, izay mampiseho ohatra ny fitaterana sy ny endrik'ireo karazana biby.
Siansa momba ny tontolo iainana: Samy hafa ny fampiasana ny isolines amin'ny siansa ekolojia. Ny sarintany amin'ny hatevin'ny fahalotoana dia sarobidy hanehoana ireo faritra misy haavo sy avo kokoa amin'ny faran'ny loto, ambaratonga ahafahana mihena ny loto ao amin'ny faritra.
Isopika dia ampiasaina mba hanehoana ranonorana mifototra, raha ny isobelas kosa dia ampiasaina hanehoana ambaratonga fametahana otrikaretina any amin'ny faritra.
Ny hevitra momba ny tsipika contour dia ampiasaina amin'ny fambolena sy ny fom-borona, izay fantatra fa mampihena ny fanapotehana ny tany mankany amin'ny ambaratonga mahavariana ao amin'ireo faritany, eo amoron'ny lalan'ny làlan-drano na vatana hafa ny rano
Siansa sosialy: Ireo zoro contour dia matetika ampiasaina amin'ny sosiolojia, mba hanehoana karazany na aseho ny fanadihadiana momba ny variana ao amin'ny faritany manokana. Ny anaran'ny andalana endrika dia miova amin'ny karazana data izay iasany. Ohatra, eo amin'ny lafiny toekarena, ny isolines dia ampiasaina ilazana ny fampisongadinana izay mety miova amin'ny faritany iray, mitovy amin'ny isodapane izay miresaka ny vidin'ny hetsika mihetsika, ny isotim dia manondro ny vidin'ny fitaterana avy amin'ny loharanom-bolan'ny akora, izany hoe Isoquant miresaka momba ny fampitomboana ny habetsaky ny fampiasana ny fampahalalana vaovao mifantina
antontan'isa: Amin'ny fitsapana azo refesina, ny isolines dia ampiasaina amin'ny fahazoana manatona miaraka amin'ny tombantombana ny haben'ny mety hiseho, antsoina hoe andodensity line na isodensanes.
Haitoetrandro: Isolines dia misy fampiasana tsara amin'ny meteorology. Ny fampahalalana azo avy amin'ny tobim-pianarana sy ny zanatsoratra climatic, dia manampy amin'ny fanaovana sarintany meteorological contours, manondro toetran'ny vanim-potoana toy ny rotsakorana, herin'ny pneumatic mandritra ny fe-potoana. Is Isika sy isobars dia ampiasaina ao amin'ireo takelaka maro mba hanehoana ny singa thermodynamic samihafa izay misy fiantraikany amin'ny toe-javatra klimika.
Fandalinana mari-pana: Izy io dia karazana isoline izay mampifandray ireo teboka miaraka amin'ny mari-pana mitovy, antsoina hoe isotherms sy ireo faritany izay mifamatotra amin'ny taratra masoandro izay mitovy endrika aminy antsoina hoe isohel. Isolines, mitovy amin'ny hafanana fanao isan-taona dia antsoina hoe isogeotherms ary ireo faritra mifandraika amin'ny mari-pana amin'ny ririnina na mitovy aminy dia antsoina hoe isochemical, fa ny antonony amin'ny fahavaratra dia antsoina hoe isothere.
Fandoroana rivotra: Ao amin'ny meteorolojia, tsipika iray mifanohy mampifandray amin'ny mombamomba ny hafainganam-pandehan'ny rivotra izay antsoina hoe isotach. Ny isogon dia manondro rivotra kely tsy miova
Ny orana sy ny hamandoana: Teny maromaro no zahana amin'ny fanondroam-bolo izay mampiseho ireo faritra na faritra misy orana sy fotaka.
Isoyet na Isoyeta: asio orana eto an-toerana
Isochalaz: izy ireo dia zoro mampiseho ireo faritany misy fiatoana ny havandra.
isobront: Izy ireo dia mpitari-dàlana mampiseho ireo faritra nahomby tamin'ny hetsiky ny tafio-drivotra tamin'ny fotoana iray.
Isoneph mampiseho ny fiparitahan'ny rahona
Isohume: izy ireo dia zoro mampiray ny faritany miaraka amin'ny fanao tsy tapaka lalandava
Isodrostherm: Mampiseho ireo faritra amin'ny fanamandoana na fitomboan'ny ando.
Isopectic: manondro toerana misy daty fizarana ranomandry manavaka, ny isotac dia manondro daty manala baraka.
Ny tsindry Barometika: Amin'ny meteorolojia, ny fikarohana ny tsindry amin'ny rivotra dia ilaina amin'ny fiandrasana ny fananganana toetr'andro ho avy. Mihena ny lanjan'ny Barometric amin'ny haavon'ny ranomasina raha aseho amin'ny tsipika iray. Isobara dia tsipika iray mampiray ny distrika amin'ny lanja climatic tsy tapaka. Isoallobars dia mpitarika miaraka amin'ny fiovan'ny lanjany mandritra ny fotoana voafetra. Ny isoallobars, noho izany, dia azo atokana ho an'ny ketoallobars sy ny anallobars, izay manondro ny fihenan'ny fitomboan'ny lanjany mitokana.
Thermodynamics sy injeniera: Na dia misy tsindrian-tsarimihetsika tsindraindray aza ireo zotra mifantoka ity dia mahita ny fampiasana azy ireo amin'ny endrika sary momba ny fampahalalana momba ny fampahalalana an-tsary sy ny sarimihetsika an-tsehatra, ny ampahany amin'ireo karazana ara-dalàna mahazatra ampiasaina amin'ireto fampianarana ireto:
Isochor maneho ny sandan'ny sanda tsy miova
isoclines izy ireo dia ampiasaina amin'ny toe-javatra mampiavaka
isodose manondro ny fitazonana ny ampahany mitovy amin'ny taratra
isophote fanilo tsy miova izany
fanindrahindram: Ny tsipika contour dia tena mahasoa amin'ny fieritreretana momba ny saha mahasarika amin'ny tany. Fanampiana amin'ny fikarohana mahasarika sy ny fihenan'ny magnetika.
Ny andalana contour isogonic na isogonic dia mampiseho andalana mitotongana manintona foana. Ny tsipika izay maneho ny fihenan'ny zero dia antsoina hoe zotra Agonic. Ny nosy iray izay manambatra ny fomba fiasa tsirairay, miaraka amin'ny hery manintona foana dia antsoina hoe tsipika isodynamic. Ny tsipika isoclinic dia manangona ny fanamafisana isam-paritra rehetra miaraka amin'ny fisitrihana mahavariana, raha ny tsipika aclinic kosa dia manangona ny faritra rehetra miaraka amin'ny fisitrihana siva tsy misy dikany. Ny tsipika isophoric dia mahazo ny fomba tsirairay miaraka amin'ny fihenan'ny tsy fahita matetika isan-taona.
Fanadihadiana geografika: Ny fampiasana tsara indrindra amin'ny isolines - contours, dia ho an'ny fanehoana ny haavon'ny toerana avo sy ny halalin'ny faritra iray. Ireo tsipika ireo dia ampiasaina amin'ireo sarintany topografika mba hanehoana ny haavon'ny sary ary ny bathymetric mba hanehoana lalina. Ireo sarintany topografika na bathymetric ireo dia afaka ampiasaina hampisehoana faritra kely na ho an'ny faritra toa ny maro an'isa maro an'isa. Ny toerana miandalana eo anelanelan'ny tsipika contour, antsoina hoe mpanelanelana dia manondro ny fitomboan'ny halaliny eo anelanelan'ny roa.
Rehefa miresaka faritra iray misy tsipika mifampitaingina, ny tsipika manakaiky dia mampiseho fironana na zoro avo, raha ny takelaka lavidavitra kosa dia miresaka fironana malemy. Ny faribolana mihidy ao anatiny dia manondro hery, raha ny ivelany kosa mampiseho mihintsana. Ny faribolana lalina ao amin'ny sarintany iray misy dia mampiseho fa mety manana fahaketrahana na crater ny faritra, amin'izany fotoana izany antsoina hoe "hachures" dia aseho avy ao anaty faribolana.
Jeografia sy ny Oceanography: Ny sarintany mifangaro dia ampiasaina amin'ny famotopotorana momba ny topografika ho an'ny vondrona, ny fampivoarana ara-batana sy ara-bola amin'ny velon'izao tontolo izao. Isopach dia làlam-pifandraisana izay ahazoana foci miaraka amina tariby mitovy habe amin'ny singa ara-jeolojika.
Ankoatr'izany, amin'ny ranomasina ranomasina, ny faritra contour dia mitovy amin'ny zoro contour antsoina hoe isopicnas, ary mampifandray ireo teboka isohalins miaraka amin'ny masira an-dranomasina mitovy hevitra. Ny Isobathytherms dia mifantoka amin'ny mari-pana mitovy amin'ny ranomasina.
electrostatics: elektrostatika amin'ny habaka dia matetika aseho miaraka amin'ny sarintany isopotential. Ny curve izay manintona ireo teboka misy ny tanjaky ny herin'aratra tsy miova dia antsoina hoe line isopotential na equipotential.
Toetran'ny tsipika contour amin'ny sarintany misy
Ny sarintanin'ny contour dia tsy hoe fanehoana fiakarana fotsiny, na torolàlana amin'ny fiakarana na halalin'ny faritany, fa ny fampisongadinan'ireo alikaola dia mamela fahatakarana misimisy kokoa momba ireo tany rakotra. Ireto misy fampisongadinana sasany izay matetika ampiasaina amin'ny sarintany;
Karazan-tsipika: Azo asiana teboka, matanjaka na mihazakazaka io. Ny tsipika marika na làlam-pandeha dia matetika ampiasaina rehefa misy fampahalalana momba ny contour miorina amin'ny tsipika iray matanjaka.
Milamina: Miankina amin'ny hoe hatanjaka na matevina ny tsipika notarihana. Ny sarintany misy ny contour dia matetika misy tarehimarika ahitana habe miovaova mba hanehoana toetra isan-karazany na karazany samihafa any an-tampon'ny faritany.
Lisitry ny tsipika: Ity karazana fifangaroan'ny tsipika ity dia miverina amin'ny torolàlana iray hahafantarana azy avy amin'ny tsipika fototra. Ny fanodinana tsipika ihany koa dia ampiasaina ho toy ny safidy amin'ny toetra tsara.
Fametahana laharana: Zava-dehibe ao amin'ny sarintany rehetra misy. Matetika izy io dia eo akaikin'ny tsipika contour na mety hiseho amin'ny contour guide. Ny sandan'ny isa dia manampy amin'ny fanavahana ireo karazana boribory.
Fitaovana sarintany momba ny lohahevitra
Ny sarin-tsarimihetsika mahazatra dia tsy fomba tokana amin'ny fametahana tsitokantoka na contours. Na dia eo aza ny maha-zava-dehibe azy ireo, miaraka amin'ny fivoarana amin'ny fanavaozana, ny sarintany dia eo amina rafitra mandroso kokoa. Misy fitaovana marobe, fangatahana serasera ary fandaharana azo ampiasaina hanampiana an'io. Ireo sarintany ireo dia hitombina ho marina, haingana be dia be, havaozina mahomby ary azonao atao koa ny mandefa azy ireo amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miasa aminao! Manaraka, vita ho an'ny ampahany amin'ireo fitaovana ireo miaraka amin'ny famaritana fohy
Google Maps dia avotra velona eran'izao tontolo izao. Ampiasaina hamantatra ny tanàna, ary ho an'ny tanjona hafa. Manana "fomba fijery" azo jerena maromaro, ohatra, ny fifamoivoizana, satelita, topografika, lalana, sns. Ny famporisihana ny sosona «Landscape» avy ao amin'ny menio safidy dia hanome anao ny topografia topografika (miaraka amin'ireo tsipika mifandimby).
Gaia, ArcGIS, Navigator Backcountry (Fampiharana mifangaro)
Tahaka ny fampiharana finday maro ho an'ny Android sy iOS, ny mpanjifa iPhone dia afaka mampiasa Gaia GPS. Manome sarintanin'ireo topografika miaraka amin'ireo karazana maro samihafa izy ireo. Ireo fampiharana ireo dia mety maimaim-poana na andoavam-bola arakaraka ny fampahafantarana nambara. Ny fampiharana amin'ny lalana dia tsy ampiasaina fotsiny mba hahazoana data topografika, fa tena ilaina koa izy ireo. Ny fampiharana ArcGIS sy ireo rindranasa ESRI samihafa dia tsy azo ampiasaina amin'ny mapiasa fotsiny.
Tsy afaka milalao miaraka amin'ny fahaiza-manao rehetra ao amin'ny telefaona finday ianao, ary ity no toerana izay toerana hiasana sy PC ny mahery fo. Misy dingana an-tserasera sy ny fampifanarahana programa fametrahana mba hanampy anao hamita ny asa manaraka. Captopo dia fitaovana fitarihana miorina amin'ny fandaharana izay ahafahanao manonta ireo sarintany topografika namboarina. Ankoatr'izay, mamela anao handefa / hamindra azy ireo amin'ny fitaovana GPS na telefaona finday ianao. Ankoatr'izay, dia manohana ny fanao manokana na ny sarintany ary manome izany amin'ireo mpanjifa samihafa.
Azo jerena ho toy ny mpanome mpanohana. Io dia toa an'i Caltopo (voalaza etsy ambony), na izany aza dia mifantoka amin'i Canada sy Etazonia izy (tena matoky izahay fa hanangona firenena samihafa ihany koa izy ireo!). Izy ireo dia manome sarintany manokana momba ny antsipirihany, ao anatin'izany ny sarintany an-tsary, sary amin'ny satelita ary sarintany an-tsokosoko any amin'ny faritra rehetra any Etazonia. UU. Sarintany tena avo lenta, izay azonao jerena an-tserasera tsy misy vidiny na mandefa azy ireo ho ny pirinty voalohany amin'ny vidiny kely.
Afaka misoratra anarana ianao Fiofanana ArcGIS Mipetraka ao amin'ny Edunbox miaraka amin'ny fanohanana 24 / 7 ary fidirana amin'ny androm-piainany.
Ny lahatsoratra dia fiaraha-miasa ho an'ny TwinGEO, nataon'i Amit Sancheti namanay izay miasa amin'ny maha mpanatanteraka SEO azy Edunbox ary eo no ametrahany ny asa rehetra mifandraika amin'ny SEO sy ny fanoratana atiny.
Previous Post«Previous Ny FES dia nandefa ny Observatory India ao amin'ny GeoSmart India
Next Post FARO dia hampiseho ny haitao 3D fahitany ho an'ny geospatial sy ny fananganana amin'ny World World Geospatial Forum 2020manaraka »